Meitu na Huawei rụkọrọ ọrụ iji melite algọridim nke igwefoto ya | Androidsis
N'ihi na ọ dịghị onye bụ ihe nzuzo na Huawei nwere ụfọdụ igwe foto kacha mma dị n’ahịa, nke a gosikwara na ya P30 Pro, ngwaọrụ nke, rue n'oge na-adịbeghị anya, kacha mma niile na-ewere foto na ngalaba izugbe, aha nke ọhụrụ na-ewere ugbu a Ihe ngosi 10 + 5G dị na Galaxy.
Onye na-emeputa ihe na China Meitu amatala nke a, na kedu ka ọ ga - esi bụrụ, ma ọ bụrụ na ọgbaghara nke Huawei kpatara na mwepụta ọ bụla nke ekwentị ọhụụ anaghị ahụ ya? Tụkwasị na nke ahụ, Huawei na-egosi mgbe niile na pịa, ebe ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị kachasị etinye aka na ntanetị. Maka nke a na uru sitere na imekọ ihe na ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ a bụ nke ahụ Meitu soro ya meziwanye ngalaba foto nke igwefoto ya site na iji algorithms rụọ ọrụ, ihe ekpughere n'oge na-adịbeghị anya ma gbasaa na n'okpuru.
HarmonyOS, ọhụrụ sistemụ arụmọrụ nke ga-asọ mpi na gam akporo, ka emepụtara na Huawei Development Conference nke afọ a, nke emere na mmepe na nso nso a. Mana nke a abụghị naanị ihe a mara ọkwa.
Meitu, n'aka nke ya, n'oge ihe omume ahụ, gosiri ya kwadoro Huawei iji nye ohere ịnweta algọridim igwefoto usoro, iji mekwuo mkpa ndị ọkachamara chọrọ.
Imekọ ihe abaghị uru naanị maka Meitu, kemgbe Onye isi ngalaba teknụzụ nke Huawei kwuru "Obi abụọ adịghị ya na ike Meitu n'ọkwa ụlọ ọrụ njikarịcha". Ndị isi ahụ rụtụrụ aka na ọtụtụ ndị ọrụ ekwentị Huawei na-eji sọftụwia igwefoto Meitu, yabụ ndị ọrụ teknụzụ kpọrọ ndị otu Meitu ka ha rụọ ọrụ kachasị mma yana mmelite ngwa ngwa igwefoto ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Meitu rụkọtara ọrụ na Huawei iji melite algorithm nke igwe foto ya
Galaxy A10s: Samsung ohuru-njedebe